Huwandu hweVanhu Vakabatwa Vaine Covid-19 Pazuva Rimwe Chete Hunonzi neNyanzvi Hwakawandisa
Huwandu hwevanhu vakawanikwa vaine COVID-19 pazuva rimwe chete hunonzi nenyanzvi dzehutano hunofanirwa kuita kuti hurumende ifungisise nezvekuvheneka vanhu vakawanda pazuva.
Bazi rezvehutano rinoti vanhu zana nemakumi masere nevaviri kana kuti 182 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 pavanhu mazana mana negumi nevatanhatu, kana kuti 416 vakavhenekwa neMuvhuro munyika yose pachishandiswa nzira yekuvheneka nemichina yePCR.
Izvi zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvinomwe nemazana maviri ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7 298.
Vanhu vafa vasvikawo pamazana maviri negumi, kana kuti 210, zvichitevera kuziviswa nezvekushaya kwevamwe vaviri kuBulwayo.
Huwandu hwevanhu vapona kubva kuchirwere ichi hwakasvika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mashanu nevashanu, kana kuti 5 455, izvo zvakasiya vanhu vanoita chiuru nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatatu, kana kuti 1 633 vachiri kurwara.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuuya panguva iyo hurumende yakawana zvimwe zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere, kana kuti PPEs, kubva kunyika yeEgypt pamusoro pezvimwe zvakabva kuRussia zvakatambirwa munyika neMuvhuro.
Nekune rumwe rutivi, mutewedzeri wemutungamiri wenyika vari zvakare gurukota rezvehutano, VaConstantino Chiwenga, vakaudza vatori venhau kuti hurumende yavo ichange yorambidza veruzhinji, makurukota pamwe nevakuru vehurumende kuita nzendo dzekunorapwa kunze kwenyika.
VaChiwenga vakati kutumira varwere kunorapwa kunze kwenyika kuri kudya mari yekunze shoma iyoyo iri muhomwe yehurumende.
Asi nyanzvi mune zvehutano uye vachidzidzisa zvehutano paNottingham Trent University kuBritain, Doctor Mathew Nyashanu, vanoti mashoko aVaChiwenga aya haafanirwe kubata veruzhinji nekuti vagara vachienda kunorapwa kunze kwenyika vanhu vose vanovaziva.
Doctor Nyashanu vanoti ivo VaChiwenga ndivo munhu anogara ari muchadenga achinotsvaga kurapwa kunze mwenyika, pamwe nevamwe vari muhurumende yavo.
Asi vanoti hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa zvinhu muzvipatara isati yatora matanho akafanana neavakazivisa aya, sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka mune zvehutano munyika.
Panyaya yehuwandu hwevanhu vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19, Doctor Nyashanu vanoti chikamu chevanhu vakabatwa vaine chirwere, icho chinodarika zvikamu makumi mana kubva muzana, chakakurisa kwazvo pachitariswa kuti pakavhenekwa vanhu mazana mana negumi nevatanhatu chete.
Vanoti panofanirwa kusimbiswa nyaya dzekudzidzisa veruzhinji, uyewo kuti hurumende iwedzere hurongwa hwekuwanisa vanhu zvekushandisa mukudzivirira kuramba chirwere ichi chichipararira munyika.
Zvichakadaro, Johns Hopkins University Hospital inoti huwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nezvisere, kana kuti 27 million 368 000.
Huwandu hwevanhu vafa hwadarikawo pazviuru mazana masere nemakumi mapfumbamwe nezvitatu, kana kuti 893 000.